Maqaallada ku saabsan Hong Kong
Sidee Loo Helaa Shaqo Gudaha Hong-Kong?
November 26, 2020 Antika Kumari Hong Kong, shaqo
Hong Kong waxay bixisaa rajo shaqooyin badan oo gaar ah oo ku saabsan waxyaabihii hore, xarunta maaliyadeed ee caalamiga ah, iyo isgoyska u dhexeeya Bariga iyo Galbeedka. Iyo intaad ubaahantahay inaad heshid shaqo si aad ubilaabato shaqada Hong Kong, shaqooyinka qaarkood way uqalmayaan
October 21, 2020 Maitri Jha Hong Kong, fiisada
Iyada oo leh soojiidasho caan ah iyo fursado daawasho, Hong Kong waa lagu barakeeyey. Waxaad raadineysaa waxyaabo aan tiro lahayn oo aad aragto oo aad sameyso. Muwaadiniinta ka socda 170 dal iyo dhulal ayaa booqan kara Hong Kong fiiso la'aan. Iyo, iyadoo kuxiran jinsiyadda,
June 17, 2020 Antika Kumari Hong Kong, waxbarasho
Qiyaastii 22 Jaamacadood ayaa qalin jabiya Jaamacadaha Hong Kong. Sideed ka mid ah dadweynaha ayaa ah jaamacadaha intiisa kalena waa kuwo gaar loo leeyahay. Fasalada badankood, dhammaan sideedda jaamacadood ee ku yaal Hong Kong ayaa adeegsada Ingiriisiga. Hoos waxaa ku qoran liiska
Cisbitaalada gaarka loo leeyahay ee ugu Fiican Hong Kong
April 12, 2020 Shubham Sharma caafimaadka, Hong Kong
Hong Kong waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caafimaadka badan adduunka. Adeegyada daryeelka caafimaadka ee magaalada waxay hayeen tayo sare. Cimriga Hong Kong ayaa ugu sarreeya adduunka oo qiyaastii ah 85 sano. Hong Kong's
Waxbarashada iyo Iskuulada ku yaal Hong Kong !!
February 24, 2020 Karuna Chandna Hong Kong, dugsiga
Iskuulada ugu Fiican Hong Kong! Nidaamka waxbarashada ee Hong Kong wuxuu ku saleysan yahay nidaamka UK. Waxaana xukuma Xafiiska Waxbarashada iyo Waaxda Daryeelka Bulshada. Waxaa jira Dugsiyo badan oo caalami ah oo ku yaal Hong Kong. Way awoodaan
Muxuu Yahay Kireynta Guriga Iyo Qiimaha Ku Nool HonKong
February 19, 2020 Shubham Sharma Hong Kong, guryaha
Hongkong waa meesha ugu wanaagsan uguna liistada liiska socotada kasta. Laakiin waxaad jeclaan jirtay magaalada sida aad u jeceshahay inaad ku noolaato halkaas marka loo eego waa inaad heshaa shaqo wanaagsan taas oo aad ku hubin karto sida
Nidaamka Gaadiidka ee Hong Kong
February 17, 2020 Antika Kumari soo qaado, Hong Kong
Tilmaamaha Gaadiidka ee Hong Kong waxay awood u leedahay inay qanciso dhammaan baahiyaha dalxiisayaasha. Gaadiidka dhulka wuxuu ka kooban yahay MTR, tagaasida, basaska, basaska laga raaco, iyo taraamyada. Sidoo kale, adeegyada doomaha u dhexeeya Kowloon iyo Jasiiradda Hong Kong, iyo jasiiradaha ku teedsan.
Hoteellada Nice ee Hong Kong
Mawaxaad raadineysaa hoteelo fiican oo ku yaal Hong Kong? Hong Kong waa meel ay ku yaalliin qaar ka mid ah hudheellada ugu wanaagsan iyo kuwa raaxada leh sidoo kale. Hong Kong waa mid ka mid meelaha ugu wanaagsan ee dalxiiska adduunka. Hong Kong ayaa leh
Waqtiga ugu Fiican ee Aad Ku Soo Booqo Hong Kong
February 10, 2020 Antika Kumari Hong Kong, safarka
Hong Kong waa mid ka mid ah caasimadaha ugu waaweyn ee la cuni karo adduunka. Jidka ka dambeeya, waxaa jira muuqaallo naxdin leh, oo ay ku jiraan buuro qurux badan iyo jardiinooyin waaweyn. Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu soo booqdo Hong Kong waa inta lagu jiro bilaha bartamaha Disembar-Febraayo. Marka
Miyaad booqaneysaa Hong Kong? Waa inay tagtaa meelahaas !!
February 6, 2020 Karuna Chandna Hong Kong, wax in la sameeyo
Hong Kong waxaa loo yaqaanaa magaalo qurux badan. Iyo goob loo xusho dukaameysiga raaxada. Wax cusub iyo wax gaar ahi waa hareeraha gees kasta. Waxay noqon kartaa macbad qadiim ah ama dukaan lagu iibiyo qalabka elektiroonigga ee ugu dambeeyay. Booqashada Hong